Daawo: 2 Bilood Oo Hareerayn Ah Kadib Qatar Ma isku Dhiibtay Xulufada Sacuudiga iyo imaaraat-ka Carabta?.
60 Maalmood ayaa kasoo wareegtay markii Qaar katirsan dowladaha Gacanka carbeed ay go'doomin dhan walba ah kusoo rogeen dowladda Qatar oo kamid ah dowladaha Khaliijka ee Hodonka ku ah shidaalka iyo dahabka.
Shirkadda Qatar Airways ayaa laga mamnuucay dowladaha UAE iyo Saudi Arabia
Wasiirka arrimaha dibadda Qadar ayaa sheegay in laba bilood oo hareerayn ah kadib aysan saameyn sidaas uweyn ku reebin dadka Qadariyiinta islamarkaana ay diideen dhammaan shuruudihii ka yimid dowladaha kala ah Sacuudiga, Imaaraatka Carabta, Baxreyn iyo Masar.
Warbixin uu baahiyay Telefeshinka Afka Carabiga ku hadla ee Al Jazeera ayaa lagu sheegay in 60 maalmood hareerayn ah kadib Qadar ay horumar ka sameysay siyaasadda arrimaha dibadda, ganacsiga iyo Melleteriga islamarkaana ay ku guuleysatay in reergalbeedka ay ka gaddo in aanay taageerin waxa Argagaxisada loogu yeero.
Shuruudaha dowladaha hareereynta soo rogay ay hordhigeen Qadar waxaa kamid ah in ay albaabada isugu laabto Telefeshinka Al Jazeera islamarkaana ay magaalada Dooxa ka Erido Hoggaamiyaasha Ururka Ikhwaanul Muslimiin iyo Xamaas balse Qadar ayaa gaashaanka u daruurtay dhammaan caga jugleynta ka timid xulufada Sacuudiga iyo imaaraatka.
Dowladda Turkiga oo kumanaan Askari iyo Maraakiib dagaal udiray magaalada Dooxa ayaa la rumeysanyahay in ay qeyb ka tahay fashilinta go'doominta lacaalamiyeeyay ee Qadar lasaaray.